Nkpọrọgwụ: Nghọta na Kọmputa na Ntanetị Ịntanetị
Kọmputa na-enye ụzọ maka ndị na-eme nchọgharị cyber iji wakpo ọtụtụ weebụsaịtị. Imirikiti ebe nrụọrụ weebụ e-azụmahịa na ntanetịime weebụ gụnyere ihe ndị dị ka mmepe weebụ na Search Engine Optimization (SEO). Echiche nke ndị omempụ na-egbu ma na-ezu ohi ozi ọma adịghị emetụta uche anyị. N'ihi ya, ọtụtụ n'ime ebe nrụọrụ weebụ e-commerce, tinyere ụfọdụ blọọgụ, nọ n'okpuru ndị na-agba ọsọ - paie excel 2014. Usoro ntanetị nke Intanet dị ka ohi ohi, kaadị akwụmụgwọ kaadị akwụmụgwọ na ego laundering na-eme n'okpuru mmezi nke usoro ịme nchọgharị na ịba ụba.
Egwuregwu Kọmputa nwere iwu na ahụ ntụpọ ahụ, nke na-achịkwa iji kọmputa na ịntanetị dị ka akụ. Ụdị ọnyà nke ịntanetị nwere iwu na-achịkwa ha, ndị ikpe ahụ nwekwara ike ịnweta ihuokwu maka iwu ọ bụla na-akwadoghị na weebụ. Usoro Ngwá Ọrụ na Mmegbu nke Kọmputa (CFAA) na-egosi ọnyà ịntanetị dịka ikike ọ bụla nke usoro kọmputa ma ọ bụ karịa ikike, nke onye ọrụ ma ọ bụ usoro njikọ weebụ na-emetụta. Ọnọdụ ndị a na-ezo aka na kọmpụta dị ka PC ọ bụla, nke na-emetụta iwu obodo ma ọ bụ iwu mba ọzọ.
Lisa Mitchell, Semalt Onye Ahịa Nlekọta Ndị Nlekọta, na - enye ụfọdụ n'ime kọmputa aghụghọ:
Ihe ama ama ndi Nigeria. Ị nwere ike ịhụ ozi ịntanetị ndị a na-abịa site na "onye ọchịchị Nigeria". Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọkà mmụta sayensị ndị a na-arụrịta ụka na ha nwere nnukwu ego n'ebe ọ bụla, ma ọ dị ha mkpa obere ego iji nweta ya. Mgbe ị na-ekwe nkwa mmesapụ aka, ha na-arahụ gị n'ịnye ego, nke ahụ bụkwa njedebe nke akụkọ ahụ. Na ikpe nke ndị a internet frauds n'okpuru 18 U..S.C. § 1028 Ụgha na Ọrụ Ndị Njikọ na Njikọ na Ihe Njirimara, Ihe Nyocha, na Ozi.
Enwere ike ịnweta ozi si na kọmputa mmadụ n'enweghị nkwenye ha. N'ọtụtụ ọnọdụ, ohi ohi na-amalite na nke a site na nhazi ụlọ. Ndị na-agba ígwè nwere ike iji usoro a iji nakọta ọtụtụ kaadị amata, SSNs yana akwụkwọ ndị ọzọ dị mkpa dịka ikikere ịnya ụgbọ ala.
Ịmepụta ndị ahịa site na ozi ịntanetị. Emails nwere spam nwere ebumnobi n'azụ dị ka phishing yana iji nje iji banye na kọmputa onye ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike ịgụnye Trojans na ihe mgbakwunye email, nke nwere ike ime ụfọdụ n'ime ọrụ ndị na-eme nchọpụta.
Na-eziga malware ma ọ bụ mmemme achọghị, nke nwere ike ime ụfọdụ mmebi iwu na PC. N'ọtụtụ ọnọdụ, e nwere ụzọ dịgasị iche iche nke nje ndị a na-esi awakpo kọmputa kọmputa. Ebumnuche n'azụ ọtụtụ hacks adịghị edozi. Usoro nchịkwa na mmegbu nke Kọmputa (CFAA) na-ewere ọrụ ndị a dị ka aghụghọ nke ịntanetị ma nwee ike ikpe mmadụ ikpe dị ka 17 U.S.C. Mmebi iwu nke 506 - Mmebi iwu Criminal.
E-azụmahịa ọ bụla ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị nwere ike ịdabere na wayo ịntanetị. Ndị na-ere ahịa na-azụ ahịa n'Intanet na-etinye ọtụtụ ego n'aka ndị fraudsters bụ ndị na-abanye n'ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ma wepụ ozi bara uru. Site n'inwe njide na-aga n'ihu, e nwere ọtụtụ ọnyà ịntanetị ugbu a karịa mgbe ọ bụla. Ngwaọrụ nke ndị omempụ ji eji mbanye anataghị ikike ọtụtụ weebụsaịtị na-emewanye ka oge ịntanetị na-aga n'ihu. Ufodu ntanetia na uzo ndi ozo iji dozie ha di na ndu a. Ị nwere ike ịmụta ụzọ dịgasị iche iche si eme ka ndị omempụ na ndị omempụ na-emekọ ihe ụfọdụ.